Ukubaluleka kokuhamba ngebhayisikile ye-Aquarium | Ngeentlanzi
I-Aquariums okanye amachibi eentlanzi eneneni a indalo yasemanzini encinci okanye yasemanzini, kwaye ngenxa yesi sizathu, kufuneka siyigcine ilungelelene ukuze ihlale ikwimeko entle kwaye isempilweni. Ukufezekisa oku kulungelelana, kubalulekile ukuba siyazi ukuba isebenza njani i-aquarium yethu.
Iintlanzi zezona ndawo ziphambili nezona zibalulekileyo kwi-aquarium, ke sifuna ukuba zihlale zikwimeko entle kwaye njengawo nawuphi na umhlali, zivelisa inkunkuma ethile edla ngokungcolisa ichibi lethu. Ezi nkunkuma zisisiseko i-ammonia kunye ne-ammonia, Ngelixa nayiphi na enye inkunkuma ewela ezantsi kwaye ifakwe kwi-substrate ye-aquarium iya kubola kwaye ivelise inani elikhulu le-ammonia.
Ezi zinto zimbini, i-ammonia kunye ne-ammonia, zinetyhefu kwizilwanyana nakwizilwanyana ezihlala kwi-aquarium yethu, ke kufuneka sazi ukuba siziphelisa njani. Ukuqala, kufuneka sazi ukuba inkqubo yokuphelisa iqala ngeebhaktheriya iikholoni ngokwazo. Ikholoni yokuqala yenziwa yi-nitrosome, etyisa zombini i-ammonia kunye ne-ammonia, ebangela ukuba i-oxidize kwaye inike imveliso ebizwa ngokuba yi-nitrite okanye i-NO2.
AmaNitriti Zikwetyhefu kodwa iitrate zinetyhefu encinci kunezi, ke kuyacetyiswa ukuba zihlale zinekoloni yeebhaktiriya ukuze ziphelise kwaye zibole iammonia kunye neammonia nge nitrites, ethi yona ivelise iitrate eziza kusebenza njengesichumiso kwizityalo. .
Kwangokunjalo, ngokuba nezityalo kwi-aquarium yethu, azizukufumana kuphela i-nitrate, kodwa ziya kuthanda ukukhetha i-ammonia kunye ne-ammonia ngaphezulu iitrate kunye nee-nitrites. Ngale ndlela, baya kuqala ukufunxa ii-nitrate, zakuba zinqabile ezinye izinto eziyityhefu. Ezisinceda thina, abanini be-aquarium, ke sicebisa ukuba uhlale unezityalo ezoneleyo ngaphakathi kwitanki lakho leentlanzi, ukuze bakwazi ukulinganisa wonke umthwalo webhayoloji kunye nenkunkuma eveliswa yintlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ukubaluleka kokuhamba ngebhayisikile ye-Aquarium